सात दिन सम्म हिउमा पुरिएका बालक जोन तामाङ्गको यसरि उद्दार भयो (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
ललितपुर— फूल्चोकीमा हिउँ खेलेर फर्किने क्रममा एक साताअघि हराएका ललितपुरकाे एक विद्यालयका १७ वर्षीय किशोर जाेन तामाङ बुधबार सकुशल भेटिएपछि ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ।
माउन्टेनियरिङ क्षेेत्रमा काम गर्ने किशोरका आफन्तले उनको उद्धार गरेका थिए।
सातदाेबाटाे प्रहरी वृत्तका प्रमुख विनाेद सिलवालजाेनकाे अवस्था खतरामुक्त रहे पनि बीएनबीमा इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार भइरहेकाे जानकारी दिए। उनले भने- उनकाे शरीरमा कतै चाेट छैन। अवस्था खतरामुक्त छ। तर धेरै समयपछि जगलमा भेटिएकाले इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार भइरहेकाे छ।
ललितपुरको थसिखेलस्थित अजय शिशू सदनमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत जाेन गत बिहीबार फुल्चोकीमा हिउँ हेरेर फर्किँदा हराएका थिए। विद्यालयका प्रिन्सिपलसहित ५ र ६ का ११ विद्यार्थी हिउँ हेर्न गएका थिए। विद्यालयका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर ओली प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
उदार गर्ने प्रक्रित अधिकारि फेशाबुकमा लेख्छन्।
यसरी उद्धार भयो : (मैले खिचेको तस्बिरको स्रोत दिएरमात्र प्रयोग गर्न अनुरोध छ) सातौँ दिनमा जोन तामाङ भेटिए । फूलचोकीमै । उनी फेला परेको भनी सातदोबाटोका डीएसपी विनोद सिलवालले जानकारी दिनुभएपछि अभिभावक संघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र म गोदावरीतर्फ लाग्यौँ । बीचमा एभिन्यूज टिभीका भाइ दिपक अर्यालसँग पनि भेट भयो । वास्तवमा उनले नै जोन हराएको समाचार पहिलोपटक ब्रेक गरेका थिए । राती सवा आठ बजे जोनलाई तल गोदावरीमा ल्याइयो । उनलाई एम्बुेन्समा राखेर बीएण्डबी अस्पतालतर्फ लगियो ।
उनलाई रामकाजी तिवारी र चन्द्र आलेले बोकेर तल झार्नुभएको हो । रेस्क्यु एसोसिएसन, र्याफ्टिङ एसोसिएसनका साथै स्थानीय सुन्दर सिंह लामा, विनोद आचार्य, अनिल खत्रीसहितको १९ जनाको टोली आज सुरुमै फुलचोकीको टुप्पामा पुग्यो । त्यहाँबाट तल झर्यो । रामकाजी तिवारी र चन्द्र आलेले उनलाई फेला पार्नुभएको हो । उनी हराएपछि म र भण्डारी दाइ पनि दुईपटक त्यहाँ पुग्यौँ । आज पनि राती कहिले नौधारा, कहिले कुन उकालो र कहिले कुन उकालो जानु पर्यो ।
रामकाजी तिवारीले उद्धार कार्यका बारेमा यसरी बेलिविस्तार लगाउनुभयो, “हिजोको खोजी कार्य चित्त नबुझेपछि आज पुनः त्यहाँ पुग्यौँ । टुप्पामा पुगेर तलतिर झर्यौँ । जोन करिव दुई हजार मिटरको उचाइमा फेला परेको । सानो पोखरी रहेछ त्यहाँबाट दुई टोली छुट्टियो । हामी लाकुरी भञ्ज्याँग जाने बाटोतिर अझै दायाँ लाग्यौँ । करिव सात आठ सय मिटर तल झरिसकेपछि एउटा ब्याग भेट्यौँ । ब्यागभित्र एउटा पेन र चम्चा भेट्यौँ ।
शंका लाग्यो । दायाँ बायाँ हेर्दा मान्छे घस्रिएको ठाँउ भेट्यौँ । अझ तल हेर्दा मानिस उछिट्टिएर तल लडेको जस्तो देख्यौँ । तल गयौँ । एउटा मुढा ढलेको जस्तो रहेछ । त्यसभन्दा मुनी ठूलो पिपलको रुख जस्तो लडेको देख्यौँ । त्यसकै चेपमा अड्किएर बसेको देख्यौँ । ठिक ४ः४५ बजे भेटेका थियौँ । बीच बाटोमा टिफिन बक्स पनि भेटेका थियौँ । त्यो देखेपछि दाइ टिफिन बक्स भने । निकै खुशी लाग्यो । मानिस जस्तो देखे ।
मानिस लडेको जस्तो लाग्यो । फोटोको टोपी हेर्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जोन हो भन्ने लाग्यो र जोन भनेर करायौँ । उ फर्कियो । हामी त्यहाँ पुगेपछि बच्चा रोयो । हल्का पानी खुवायौँ । बोतलभरिको पानी सबै खाइसक्ला जस्तो गर्यो । झाडीभित्र थियो । झाडी फाडफुड गर्यौँ । बाटो एकदमै गाह्रो थियो । हामीसँग एक पुडिया बिस्कुट थियो । सबै खाँदा गाह्रो होला भनेर आधा दियौँ । तल एकदमै झाडी छ । जोन फष्टमा रोयो । जोन हो भन्दा टाउको हल्लायो । धेरै कुराकानी गरेर डिस्टर्ब गर्न पनि मिल्दैन । प्रहरी, सेना बाटो बाटोमात्र गए । झोडमा हामीहरु मात्र गयौँ । त्यहाँ बाघको पाइला पनि देख्यौँ । त्यो बाटोमा एक दुई जना मानिसमात्र हिँड्न सक्दैन । डरलाग्दो छ । मालिँगोको घारीमा एकदमै डरलाग्दो छ । बँदेलले खनेको ठाँउ एकदमै धेरै छ । चितुवा र मृत सुतेको ठाँउ पनि धेरै देखिन्छ ।”
Prevभर्खरै नुवाकोटबाट आयो दुखद समाचार !
Nextट्रक पल्टिँदा २० गोरु मरे
कतारमा रहेका विदेशी कामदारलाई मुलुक छाड्न कम्पनीको स्वीकृति नचाहिने( बिबरण सहित हेर्नूहोस)
सिन्डिकेटको विरोध गर्ने यातायात व्यवसायी हिस्स ! सरकारले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम…
चर्चित हिन्दी सिरियल ‘कुमकुम भाग्य’ कि प्रज्ञा नेपालमा जन्मिएको खुलेपछि भारतभर हंगामा! आखिर किन ?
गाउँमा औषधी बोकेर उड्ने ड्रोनदेखि सेलरोटी बनाउने मिʼसिनसम्म ! आविष्काʼर केन्द्र घुम्दा यस्तो देखियो (भिʼडियो हेर्नुस)